Edinson Cavani Oo Raaligelin Bixiyay & Man United Oo War Ka Soo Saartay Gafkii Ka Dhacay | Kaafi News
Edinson Cavani Oo Raaligelin Bixiyay & Man United Oo War Ka Soo Saartay Gafkii Ka Dhacay
November 30, 2020 - Written by admin
Edinson Cavani ayaa raalingalin bixiyay ka dib markii qoraal uu soo dhigay bogiisa Instagram lagu tilmaamay inuu yahay mid cunsurinimo ah.
Weeraryahanka Manchester United ayaa sheegay in fariinta uu u qoray taageeraha inay aheyd mid jaceyl ah isagoo masaxay sawirka iyo qoraalkii dulsaarnaa durbadii loo sheegay in si khaldan loo qaadan karo qoraalkiisa.
Cavani ayaa u jawaabayay nin ay saaxiibo yihiin oo u soo qoray: “Waan ku jeclahay El Madator!” isagoo ugu jawaabay “Gracias Negrito” oo micnaheedu yahay “Mahadsanid madowgii yaraa”. Waana erey aan cunsuriyad ka aheyn dalalka afka Isbaanishka ku hadla ee South America.
Cavani ayaa yiri: “Fariinta aan soo dhigay ka dib kulankii Axada waxaan u la jeeday mid jaceyl ah oo aan ku salaameyaya saaxiibkeey, waxaan uga mahadcelinayay hambalyadiisa ciyaarta ka dib.
“Waxa ugu danbeeya ee aan doonayay waxay aheyd inaan cid uun ka careysiiyo.
“Si buuxda ayaan uga soo horjeedaa cunsuriyada, waana tirtiray fariinta durbadii la ii sharaxay in si qaldan loo fasiran karo. Waxaan doonayaa inaan si dhab ah raaligelin uga bixiyo arintaan.”
Manchester United ayaa sidoo kale haatan ka hadashay dhacdadaan iyagoo yiri: “Waxaa inoo cadaatay in fariinta Cavani aysan ku jirin wax naceyb ah islamarkaana uu masaxay markii lagu wargeliyay in si qaldan loo fasiran karo.
“Edinson raaligelin ayuu ka bixiyay gafkiisa aan ku talogalka aheyn.
“Manchester United iyo dhamaan ciyaartoyda waxay si buuxda ugu heelan yihiin la dagaalanka cunsuriyada.”